R & D Team - Southern aqrisanin wearable Technology Co., Ltd.
Ku saabsan ELEHEAT
Lakabka Base kulul
Air habboon -conditioned
Kuleelka Neck Guard
Habboon Therapy kulul
Kuleelka maaskaro Eye
Laalaab Jilibka kulul
Barkinta kursiga kulul
Qaab dhismeedka Kooxda:
R & D Xaruntu waxay ka kooban yahay design Fashion, farsamo, electronic, software, baaritaanka iyo maamulka mashruuca.
1. kooxda The fashion design waa qof ku taqasustay design style dharka iyo sameynta tijaabada sida ay codsiga macaamiisha ama horumarinta is.
kooxda farsamo 2.Beerta waa qof ku taqasustay 3D abuurka iyo design caaryada.
3. kooxda The elektarooniga ah waa qof ku taqasustay Bannaanka digital, LF circuit macmal ah, HF (RF) wareeg iyo xoogga design circuit electronic.
4. kooxda software The waa qof ku taqasustay firmware soo MCU / DSP gundhig, codsiga PC, sooci codsiga iyo macruufka / design codsiga Android.
5. kooxda baaritaanka waxaa ku takhasusay imtixaanka faahfaahsan si loo hubiyo in design ugu fiican.
6. Kooxda PM waa qof ku taqasustay maamulka shaqaale, qalab, kharashka / qiimaha iyo waqtiga si loo hubiyo in mashruuca oo dhan lagu dhammeystiri karo waqtiga iyo si hufan.
Goobta iyo qalabku:
R & D Xaruntu waxay leedahay 520 xafiiska mitir iyo shaybaarka. Meesha ugu shaqeeya waa nice iyo qalabaysan waxyaabaha hoos ku qoran:
Waxaan diiradda on raasamaal hantida aqooneed. Ilaa xilli 2-aad ee 2018, waxaan helay 18 shatiyada been abuurtay, 28 utility model shatiyada iyo 4 shatiyada muuqaalka, dhammaado 2 cilmi mashruuc saynis la qeybinta sayniska & technology ee Dongguan iyo qeybinta yar / dhexdhexaad ganacsi ee Dongguan. Dhinaca kale, waxaan leenahay shatiyada kale oo badan oo cusub oo la alifay iyo model utility shatiyada la sugayo.
Sababo la R wax soo saarka & D shaqada waa shaqo adag, iyo dadka ku hawlan R & D waa in la khaas ah oo ku saabsan inta boqortooyadayda ku gaar ah, our R & D maamulka isticmaalayo shaqaalaha furta qoondaynta, sheeg shaqaalaha kasta oo mashruuca la heshiis siman oo sheeg talantigii ka taagan on mawduuca gaar ah la heshiis toosan . On maamulka mashruuca dadban, mid ka mid ah oo yaqaana qaabka wax soo saarka iyo waxqabadka, iyo sidoo kale wanaagsan ee khayraadka qoondaynta iyo isuduwidda aannu xilsaaray. Waxaa inta badan la kulmay khabiir technology ama khabiir sare oo ka tirsan maamulka. On maamulka mashruuca toosan, waxaan isticmaali mid ka mid ah oo yaqaana aqoonta wax soo saarka, sayniska iyo injineernimada awooda fikirka adag iyo habka wax soo saarka. Inta badan waxay yihiin injineer aad u fiican.
© Copyright - 2010-2020 : All Rights Reserved. Guide Products - Featured Products - Tags Hot - Sitemap.xml - amp Mobile
kuleelka Vest, Saraawiisha kulul, 12v kulul Car Kursiga barkin, jaakada kulul, kulul Insoles dabayn karo , Boorso ,